Usoro 3 Teknụzụ nke ndị ahịa kwesịrị ilele na 2015 | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 7, 2015 Tuesday, January 6, 2015 Douglas Karr
Data sitere na ndi ahia gi ugbua… site na ekwenti ha, ihe omuma ha, desktọọpụ ọrụ ha, mbadamba ha na ọbụna ụgbọ ala ha. Ọ naghị akwụsịlata. N’oge na-adịghị anya, m gara ileta ezi na ụlọ anyị na Florida ebe anyị kwalitere sistemu mkpu ụlọ.
A na-ejikọ mkpu na thentanetị ma ọ bụrụ na downntanetị ala, ọ na-ejikọ site na njikọ ikuku dị n'ime (na batrị ma ọ bụrụ na ike efuru). A na-ahazi usoro ahụ iji chọpụta ma na-eti mkpu n'ọnụ ụzọ ọ bụla, windo ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọnụ ụzọ ụgbọala na-emeghe. Anyị nwekwara ike ịchịkwa ya niile site na smartphones.
Ejikọtara igwefoto site na ntanetị DVR na ngwa mkpanaka nke m nwere ike ile anya n'ehihie ma ọ bụ n'abalị. Site na Indiana, ị nwere ike ịgagharị n'ụlọ ahụ, enwere m ike ịhụ gị ma gbanyụọ mkpu ma ọ bụ mepee ụzọ si Indiana. Na ụgbọala ahụ bụ Ford ọhụrụ na usoro Sync, na-agwa ndị na-ere ahịa ihe nyocha na nyocha na nchịkọta egwu egwu mama m na ndepụta kọntaktị.
Mama m nwere defibrillator na obi ya na ọdụ nke ọ na-agafe na nke na-enyefe data ya niile na dọkịta ya iji nyochaa. Ka m nọ na-ele ya ka ọ na-eme nke ahụ, ụjọ tụrụ m na ọnụ ọgụgụ ngwaọrụ ndị ejikọrọ ma na-ebugharị megabytes nke data kwa ụbọchị n'ụlọ na-enweghị onye ọbụla na kọmpụta ahụ.
Kedu ihe ọ pụtara maka ndị ahịa, ọ bụ ezie? Ọ pụtara na ahịa ọ bụla kwesịrị banye n'ime nnukwu data, jiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ma kesaa mkpọsa ahaziri iche ozugbo iji bulie uru ha nwere na atụmanya ha na ndị ahịa ha. Newwa ọhụrụ a nke ejikọtara ihe bụ isi ihe ntanetị nke Google kachasị ọhụrụ na usoro teknụzụ atọ ndị ahịa kwesịrị ile na 2015.
site Soro Google Chee
Na mbido afọ ọ bụla, anyị niile n’agba mbọ ịkọ ihe na-abịa. Kedu ihe ga-eme ụlọ ọrụ ahụ? Teknụzụ ndị dị a willaa ka ndị mmadụ ga-anabata? Ọ bụ ezie na anyị enweghị bọọlụ kristal, anyị nwere data ọchụchọ. Dị ka nnukwu nchịkọta nke ebumnuche ndị ahịa, ọ nwere ike ịbụ nnukwu bellwether nke usoro. Anyị lere nyocha na Google wee gwupụta na nyocha ụlọ ọrụ iji hụ ihe na-enweta.
Njikọ ndụ ejikọrọ na-apụta - Ntaneti Ntaneti bu ihe abuo. Ka ngwaọrụ na-aba ụba wee malite ịrụ ọrụ ọnụ, ihe ndị ejikọtara ga-aghọ nyiwe maka ndụ gị. Ha ga - enyere gị aka n’ihe ị na - eme kwa ụbọchị - site na ntụrụndụ rue ịnya ụgbọ ala na ilekọta ụlọ gị.
Mobile na-akpụzi ndị Intanet nke M - Gị ama na-echeta. Dị ka ebe maka nyiwe njikọ ndị a niile, ọ nwere ike iji ọtụtụ data mepụta ahụmịhe kachasị mma. Na Internet Ihe na-aghọ ihe Intanet nke M - niile iji mee ka ndụ gị dị mfe.
Ọsọ nke ndụ na-adịwanye ngwa ngwa - Na ntanetị ma ọ bụ gbanyụọ, anyị nwere ike ị nweta ozi, ntụrụndụ na ọrụ na oge achọrọ anyị. Oge ime mkpebi ndị a na - eme oge niile - ma dịka anyị jikọtara ya, ha ga - emekwu.
Tags: 2015internet nke iheusoro teknụzụchee na Google
Feb 1, 2015 na 7:24 PM
Nghọta dị omimi na usoro ọgbara ọhụrụ maka ọdịnihu. Ekwenyere m na ekwentị na ịntanetị nke ihe bụ nnukwu ihe abụọ anyị niile kwesịrị ịnabata na ụwa nke oge a. Ma ee ọsọ nke ndụ agafeela ọsọ karịa mgbe ọ bụla. Anyị niile chọrọ ozi achọrọ naanị n'oge… ma anyị na-enweta ya.
Maka m, na smartphones na phablets bụ isi egwuregwu… onye ọ bụla ga-ha zuru (ish) Mgbakọ na ha n'ọbụ aka na a afọ ole na ole oge…